Umzi-mveliso wethu-Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company
INanchang Cemented Carbide Limited Liability Company(NCC) yinkampani elawulwa ngurhulumente, nesuka kwi603 Plant eyasekwa ngoMay 1966. Yathiywa igama elitsha leNanchang Cemented Carbide Plant ngo-1972. Yaguqula ngempumelelo indlela yobunini ngoMeyi 2003 ukuseka ngokusemthethweni I-Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company ilawulwa ngokuthe ngqo yi-China Tungsten High Tech Materials Co., Ltd.Kwaye ikwayinkampani encedisayo engundoqo ye-China Minmetals Group Co., Ltd.
Iphethe ikhonkco elipheleleyo lemizi-mveliso ukusuka kwizixhobo ze-tungsten zokuphelisa izixhobo zokugaya, i-NCC sesinye sezona ziseko zikhulu ezidibanisa imveliso, ulawulo kunye nokuthunyelwa ngaphandle kweemveliso zomgubo we-tungsten, iintonga ze-carbide enesamente, kunye nezixhobo zokusika umngxuma e-China, iimveliso zayo ziye zafunyanwa. isetyenziswa ngokubanzi kwi-metallurgy, oomatshini, iimoto, i-aerospace, imigodi ye-geological, i-electronics, njl.
Emva kweminyaka engaphezu kwama-50 yophuhliso, inkampani ifikelele kumthamo wonyaka wemveliso yeetoni ezingama-4,000 zomgubo wetungsten kunye netungsten carbide powder, iitoni eziyi-1,000 zeentonga zecarbide enesamente kunye nezinye iimveliso, iiseti zezigidi ezili-10 zezixhobo zokusika umngxuma we-carbide. I-NCC inabasebenzi be-611 kunye nenkunzi ebhalisiweyo ye-RMB 279.4 yezigidi.
Umoya woShishino: Khonza abathengi ngokusebenza nzima
Phumelela ikamva ngokomgangatho
Iqinisekisiwe kwaye Iqinisekisiwe:
Sinikela ingqalelo kakhulu kumgangatho weemveliso zethu. Unokuhlala uthembele kwizisombululo zethu. Umgangatho we-ISO 9001 ubeka ezona mfuno zisezantsi zenkqubo yolawulo lomgangatho. Ngokusekelwe koku, sisoloko siphucula iinkqubo zethu zangaphakathi. Ngale ndlela siqinisekisa ukuba ungcono kumgangatho wemveliso, imveliso kunye nokhuphiswano. Sinophicotho lwenziwa rhoqo ukuqinisekisa oku.
I-NCC isebenzisa ngokungqongqo i-ISO 9001:2015 inkqubo yolawulo lomgangatho, kwaye isebenzisa yonke inkqubo yoxanduva lomgangatho wabasebenzi ukuqinisekisa ngenkonzo eqhubekayo nesebenzayo kubathengi.
● Ukuhlolwa kwezinto eziphathekayo kunye nokuvunywa
● Ukuhlolwa komda kunye nokuvunywa
● Isiqinisekiso sezinto eziphathekayo sikhutshwa ngokwesicelo ngasinye
● Uhlalutyo lwesampulu yomthengi luyafumaneka
Sinezixhobo eziphambili kakhulu kunye neenjineli ezinamava, kwaye imveliso nganye iyavavanywa kumjikelo wayo wemveliso ukuze ihambelane neenkcukacha zayo ezimiselweyo.
Inkqubo yethu yoqinisekiso lomgangatho iqinisekisa ukuba kuphela ezona mveliso zibalaseleyo zinokusiwa kubathengi bayo kwaye zonke izinto ezihanjiswayo zihlala zisexesheni.
Isebe lethu loPhando noPhuhliso lihlala lizinikele ekwenzeni obona buchwephesha balo kubuchwephesha obukwinqanaba eliphezulu kunye neemveliso ukuze zinike inkonzo engcono kwiimfuno ezikhoyo nezexesha elizayo zabathengi. I-NCC isoloko igcina isikhundla esiphambili kubuchule be-R&D eTshayina, kwaye ineziko lobuchwephesha elikwinqanaba lephondo, kunye neziko lohlalutyo kunye novavanyo, elinabasebenzi abali-112 abaphethe izihloko zobuchwephesha kunye nezobuchwephesha, isidanga senkosi okanye ngaphezulu.
I-NCC iseke ilabhoratri yobuchwephesha ukuvavanya iipropathi kunye neeparamitha ze-tungsten carbide powder kunye ne-tungsten carbide alloys, ilabhoratri yobuchwephesha kuvavanyo lokusila ukwenza uvavanyo lokuthelekisa lokusila kwizinto ezahlukeneyo ze-carbide.
I-NCC ineziko lobuchwephesha lephondo, elithathe inxaxheba kuhlaziyo nasekuyilweni kwemigangatho yesizwe eli-12 yafumana amalungelo awodwa omenzi wechiza ali-18, kubandakanywa amalungelo awodwa omenzi wechiza ayi-3 kunye ne-15 yeemodeli ezisetyenziswayo.
Okwangoku, siye saseka ixesha elide kunye nentsebenziswano yobuchwephesha ezinzileyo kunye neeyunivesithi ezininzi eziphambili kunye namaziko ophando lwenzululwazi awaziwayo.
Ngenjongo yokuhlangabezana neemfuno zamaqabane ethu, sihlala sikhangela iindlela zokuphucula kunye nokudala izixhobo zokusika iprimiyamu ezinciphisa iindleko kwaye zandise imveliso, nkqu nezona meko zinzima.
Kwi-NCC, inkqubo yokuvelisa ibanzi kwaye ikumgangatho ofanayo, ukusuka kumgubo ocoliweyo okrwada ukuya kwizikhewu ezigqityiweyo.
Akukho nzame igcinwayo kwiSebe lethu le-R&D, kwaye inkampani iyonke isebenza ukubonelela ngezithuba ezingenanto ezinyusa imveliso, ukunciphisa iindleko zomthengi kwaye kunceda ukwenza iimveliso ezithembekileyo.
Kwi-NCC, sinyanzelisa ukuba impilo nokhuseleko lwabasebenzi bethu lubalulekile kwaye lubaluleke kakhulu kwaye lusisiseko sezenzo zethu. Sizibophelele kukhuseleko lokusingqongileyo kwaye ulawulo luqhutywa ngokungqongqo ngokuhambelana ne-ISO 14001 yeNkqubo yoLawulo lokusiNgqongileyo.
Izixhobo zeCarbide, Milling Cutter, IiMill zokuphela kweCarbide, Carbide Precision Tools, Isixhobo seCarbide, ICarbide enesamente,